Manorotoro ny Castle dia mandray anjara amin'ny Angry Birds handrava trano mimanda | Androidsis
Manuel Ramirez | | Angry Birds, Candy manorotoro, Lalao Android
Manorotoro ny Castle: Siege Master dia «Angry Birds» izay tsy maintsy hamotehantsika ny tranon'ny fahavalo an-jatony izay ho hitantsika. Lalao izay mifototra amin'ny fizika ny zavatra hankafizina toy ny dwarves rehefa hitantsika ny fipoahan'ny rindrina sy ny tara rehetra an'ireo trano mimanda ireo.
Lohateny navoakan'ny Armour Games ho an'ny Google Play Store haka ny batony navelan'ny Angry Birds ary omeo kofehy ny filalaovana izay ho fantatrao avy hatrany. Ary izy io dia mampiseho fa ny fizika ny zavatra dia niasa ka ny toe-javatra manafika dia nateraka kisendrasendra, toy ireo zavatra rehetra izay hianjera amin'ny olona voalohany amin'ny fijerintsika akaiky indrindra.
1 Lalao fandringanana tanteraka
2 Manorotoro ny Castle: Siege Master ho toy ny piozila
3 Lalao ho an'ireo izay ankafizina
Lalao fandringanana tanteraka
Manorotoro ny trano mimanda: Siege Master milalao tsara ny karatra rehetra fa miaraka aminy izy hitondra mekanika lalao fanta-daza ho antsika (ary malahelo isika), saingy apetrakao amin'ny fandringanana ireo tranon'ny fahavalo ireo, ny marina dia miteraka fahatsapana tena tsara amin'ny minitra voalohan'ny lalao.
Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy manao izany isika ampiasao ny catapult amin'ny fahefanay handefa vato lehibe (Azontsika atao aza ny manipy azy ireo goavambe) mankamin'ny andrin'ny tranon'ireo fahavalo. Hotsindriantsika indray mandeha ny efijery mba hampavitrika ny fizotran'ny fandefasana azy, amin'izay tsy maintsy manao gazety hafa isika, amin'ny fotoana hitantsika fa mety indrindra ho an'ny làlan-kizorana hamelana io vato lehibe io, raha afaka miaraka amina tokana , miaraka amin'ireo andrin'ny tranon'ny fahavalo.
Hankany isika mitsiky rehefa hitantsika ny fiantraikan'ny vato sasany manohitra ny tilikambo fahavalo sy ny taolam-paty rehetra, mangatsiatsiaka be izy ireo, ary tonga hatrany amin'ny tany nipoahan'ny baomba sasany niseho tao. Tena teboka goavan'ny Crush the Castle: Siege Master ny tsy fahatongavan'ireny fandefasana ireny sy ny fiatraikany amin'ny tranon'ny fahavalo.
Manorotoro ny Castle: Siege Master ho toy ny piozila
Ary eto isika dia miaraka amin'ny Crush the Castle: Siege Master, lalao iray piozila izay tsy maintsy hanombohantsika mandrefy tsara ny fandefasana anay rehetra mba hahatratra ny hevi-dehibe amin'ireo rafitra vato rehetra ireo izay hitsangana eo alohanay.
Tsy izany ihany, fa ny ambaratonga sasany dia hisy lapa maro izay tsy maintsy hatrehintsika amin'ny vato voafetra. A) Ie Ho hitantsika ny fahasarotana lehibe indrindra hanorotoroana ny Castle: Siege Master. Midika izany, afovoaho tsara ny fitifirana ary miaraka amin'izany no ahazoantsika ny hery lehibe indrindra amin'ny fiatraikany sy ny fanimbana.
Raha ho hitantsika ireo fahavalo rehetra hianjera. Hifankahita ihany koa isika manampy amin'ny fahaiza-manao samihafa izany dia hahafahantsika mampiseho ny mety ho fahavoazana lehibe kokoa. Zava-dehibe ny hitehirizantsika ireo fahaiza-manao ireo amin'ireo trano mimanda misy rafitra sarotra kokoa ary mila fanampiana fanampiny izy ireo hahafahany mamotika azy ireo.
Lalao ho an'ireo izay ankafizina
Farany, miaraka amin'i Crush the Castle: Siege Master hanana fotoana mahafinaritra isika, satria ny mekanika lalao mihitsy dia manampy ny lalao tsirairay samy hafa ary afaka mihomehy aza isika amin'ny fianjeran'ireo fahavalo mahaliana azy ireo.
Ara-teknika izany amin'ny folo, indrindra amin'ny fizika zavatra izay tratra tamin'ny fomba tena tsara. Manaitra io fotoana nipoahan'ny baomba io ary nesoriny ireo vato ao amin'ny fiarovana sy ireo miaramila fahavalo ireo. Ho hitantsika mihitsy aza ny fomba nitifiran'izy ireo hianjera amin'ny tongotsika. Ny sary sy ny endrika dia niasa ihany koa izy ireo mba hamenoana lalao tena tsara izay hankafizinao maimaimpoana.
Crush the Castle: Siege Master dia lalao amin'ny fomban'ny "Angry Birds" madio indrindra Amin'izay dia hanana andro maromaro ianao hankafizanao ity Krismasy efa akaiky ity. Nilaza aho fa manana izany maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ianao. Ka efa mila fotoana ny fanandramana azy. Iray amin'ireo lalao ireo izy ireo izay mahavita mijanona ao anaty fahatsiarovana anaty an'ny finday mandritra ny fotoana maharitra.
Hanorotoro ny Lapan'ny
Namboarina tsara amin'ny ankapobeny
Lalao iray hafa tsy nohamarinina ho an'ny efijery 18: 9
Manorotoro ny trano mimanda: Siege Master
Developer: Lalao mitafy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Crush the Castle dia "Angry Birds" feno tanteraka izay manimba trano mimanda
Ireo fiara adala an'ny Rev Heads Rally arcade racing